Ejipta: Mbola Mametram-panontaniana Ny Amin’ny Tena Ilàna Ilay Rivopanovàna Tamin’ny 1952 Ireo Ejipsiana · Global Voices teny Malagasy
Amin'ny fotoana ankalazàna ny fahafito amby dimapolo taonan’ny rivopanovan'izy ireo (57 taona tamin'ny 2009) dia mbola mandinika hatrany sy miresaka ny nahatonga io tranga manan-tantara io ny Ejipsiana. Tranga izay niainga taminà fanonganam-panjakana nataon’ny miaramila ka nanova ny fiainan-dry zareo sy ireo taranaka maro taty aoriana. Mandraka androany (24 Jolay 2009), mbola manohy miresaka sy mandinika ny tsara sy ny ratsy nentin’io rivopanovàna io ireo bilaogera, voaresaka ihany koa ny fanapahankevitr'ireo «Miaramila Afaka» izay nitarika ilay fanonganana nanova tanteraka an’i Ejipta niala taminà fitondrana apanjaka manaraka lalàmpanorenana mankany amin'ny repoblika.
Ho fankalazàna ilay andro, nomarihin’i Zeinobia [amin'ny teny Anglisy] aingana ny tsara sy ny ratsy mikasika ny fahatsiarovana ilay Filoha voalohany tao Ejipta, Tpkl. Mohamed Naguib.
Nampiseho sary tsy fahita firin’ilay Filoha Naguib izy tao amin'ny bilaoginy ary nanoratra fa:
Izany no tena toe-tsaina tiako hankalazaina androany, tena nino ny faombiazan’io fanonganana io sy ny fitsipiny i Mohamed Naguib.
Notohizany avy eo:
Tsy nahazo ny fandraisana mendrika azy avy amin’ny tanindrazany izy, manontany tena ary aho raha nahazo vola fisotroan-dronono mitovy amin’ny azon'ny fianakavianan’ny Filoha El-Sadat ny fianakaviany !!! Manaiky an'i Itpkl. Mohamed Naguib ho toy ny filoha voalohan’i Ejipta Atoa. Moubarak, izay mampitovy lanja azy amin'ny filoha Nasser sy Sadat, tokony hitovy amin'ny tombontsoan’ny fianakavian’ireo Filoha ireo izany ny azon'ny fianakaviany.
Hamaranany ilay lahatsorany dia miteny izy fa :
Tsy maintsy manaiky ny zon’ny Filoha Naguib sy ny fianakaviany izay nijaly mafy tamin’ny fanaovany vy very ny ainy noho ny nitarihany ireto miaramila tanora ireto isika.
Sadaikatra i Ahmed El Miligy ary tsy afaka miteny izy raha nisy vokatra tsara na ratsy tamin’i Ejipta ny rivopanovàna. Hoy izy ao amin’ny lahatsorany [amin'ny teny Arabo]:
Mbola mahasadaikatra ahy indray ny Rivopanovàna tamin’ny 23 Jolay. Tsy nisy tranga ohatr’ity teo amin’ny tantaran’i Ejipta na ankehitriny na fony fahagola, izay tsy ahafahantsika mamolavola hevitra, na mamantatra raha manaiky ianao na tsia. Raha ny mahazatra dia zavatra tsara io tranga io ao anatin’ny tantaran’i Ejipta sy ny Ejipsiana, saingy betsaka ireo mampametra-panontaniana teo amin’ny lafiny fanatanterahana azy. Izay nahatonga ahy hamerina handinika indray ny toerana misy ahy eo amin'ireo fanatanterahana goavana an'io rivopanovàna io, sy ny tena nilàna azy ho an’i Ejipta sy ny Ejipsiana na ho an’ny tombotsoan’ny tsirairay, rehefa oharina amin’ny an’ireo niaina tanatin'ny vanimpotoana fahampanjaka.
Manoratra lahatsoratra iray [amin'ny teny Arabo] manohitra ny Filoha Gamal Nasser sy ny Miaramila Afaka i Desert Cat. Miresaka momba ny tena tanjona tamin’ny rivopanovàna izy ary asehony ny nanovan’ny olona izany:
Rehefa mandinika ny tena tanjona tamin’ny rivopanovàna isika, dia hitantsika fa ny fanaisorana tanteraka ny kolikoly no voalohany indrindra tamin'izany… ka rehefa niala tamin’ny kolikoly teo aminà fianakaviana iray isika, dia miditra amin’ny kolikoly eo aminà fianakaviana maro, sy eo amin’ny zanany. Anisan’ireo zava-bitan’i Nasser lehibe indrindra ny nandripaka ny volam-panjakana Ejipsiana tamin’ny fanaovana ady, nanomboka tamin’ny adin’ny 1948 ka hatramin’ilay loza tamin’ny 1967. Kely lanja kokoa noho ny Sterlina sodaney ny Sterlina ejipsiana amin'izao, raha toa ka 4 dolara amerikana izy taloha. Voa mafy ihany koa ny famokarana landihazo: taloha isika nahavita namokatra landihazo sady tsara kalitao no be dia be, avy eo isika nanomboka namokatra landihazo feno kankana ary ny farany dia tsy namokatra intsony mihitsy. Ary mazava ho azy, tsy ho haiko adinoina mihitsy ny zavatra lehibe indrindra nataony, dia ny nanovàny ny sainampirenena maitso ho lasa saina telo loko izay mampibanjina ahy mankany amin'ny hoavy… Miarahaba an'i Ejipta amin’ity loko mena ity [eo amin’ilay saina] ary antenaiko fa hisy hanala ity ankoay ity, satria vao nampian'ny Filoha Sadat io ankoay io, izy izay tany anaty trano fampisehoana sarimihetsika tamin’ny fotoanan’ny rivopanovàna.